अष्ट्रेलियामा फेरी बढ्यो कोरोना : एकैदिन ४३ हजारमा देखियो संक्रमण फेरी लकडाउन हुने पक्का ! - jagritikhabar.com
अष्ट्रेलियामा फेरी बढ्यो कोरोना : एकैदिन ४३ हजारमा देखियो संक्रमण फेरी लकडाउन हुने पक्का !
अष्ट्रेलियामा एकैदिनमा ४३ हजार बढी कोरोना संक्रमित थपिएका छन् ।
अष्ट्रेलियाका विभिन्न राज्यमा गरी पछिल्लो २४ घण्टामा ४३ हजार ५ सय ५२ जनामा कोरोना संक्रमण पुष्टि भएको हो ।
स्थानीय सञ्चारमाध्यमका अनुसार न्यु साउथ वेल्समा ८३ हजार ३७६ जनाको स्वाब परीक्षण गर्दा सबैभन्दा बढी २३ हजार १३१ जनामा कोरोना संक्रमण पुष्टि भएको छ । यहाँ कोरोनाबाट २ जनाको मृत्यु भएको छ ।
त्यस्तै भिक्टोरियामा ६० हजार ५ सय १५ जनाको स्वाब परीक्षण गर्दा १४ हजार २० जनामा कोरोना संक्रमण देखिएको छ । यहाँ सक्रिय संक्रमितको संख्या ४८ हजार २ सय ९७ छ । भिक्टोरियामा कोरोना संक्रमणबाट २ जनाको मृत्यु भएको छ ।
यस्तै क्वीन्सल्याण्डमा ३३ हजार ३ सय १३ को स्वाब परीक्षणबाट ५ हजार ६९९ जनामा कोरोना पुष्टि भएको छ । तास्मनियामा सोमबार २ हजार ८८ परिक्षणमा गर्दा ७०२ जनामा कोरोना संक्रमण पुष्टी भएको छ ।
महेन्द्रनगर, २० पुस (रासस)ः कञ्चनपुर सीमा नाकामा ओमिक्रोनको सङ्क्रमण न्यूनीकरणका लागि पहल थालिएको छ ।कञ्चनपुरको पश्चिमी नाका गड्डाचौकीबाट दिल्ली ३५२ किलोमिटरको दूरीमा छ । जहाँ तीव्र रुपमा ओमिक्रोन सङ्क्रमित देखिँदा सुदूरपश्चिम प्रदेश र यहाँका स्वास्थ्य कार्यालय भारतबाट स्वदेश फर्किनेलाई एन्टिजेन टेष्टका साथै कोरोना विरुद्धको खोप अभियान तीव्र रुपमा अघि बढाइएको छ ।